IFTIINKACUSUB.COM: Sixir bararka maxaa keena .
Waxa beryahanba dalka ka taagnaa sicir barar kolba kolka ka dambeysa sii kordhayey. Waana mid aynu wax la wadaagno adduunka, wax badanina ay inaga inagu khaas tahay. Waa mid lagaga bixi karo xanuunkiisa inta badan iskaashi ajshacbi iyo xukuumad ka yimaada, bal se ay tahay inay aanu dawlad ahaan si wadajir ah uga hawl galno, shukaantana ay u qabato xukuumaddu.
Halkaas su’ aal ayaa ku jirta oo ummaddeenu xukuumad iyo dawlad isagu si ayey u adeegsadaan. Aan qayaxo, ee xukuumaddu waa Golaha Fulinta, Dawladduna waa seddexda Gole ee Fulinta, Sharci-dejinta iyo Garsoorka iyo laamahooda oo dhan.
Mawduucan oo ah mid aad u baxad weyn, una qoto dheer aan kor xaadis ahaan af sahlan oo suuq joogu fahmo aynu ku bayaamino waxa looga jeedo sicir barar. Waxa ay tahay sicirka alaabta iyo mushqaayadda adeegyada oo kor u kaca muddo
cayimin. Waxa lagu cabiraa alaabooyin isagu jira cunto dhar, iyo qalab kale oo loo arko daruuri ayna ku jiraan shidaalku oo dal waliba ku bilaabo qiime malintaas uu joogo, deedna bil walba la eego inta celcelis ahaan boqolkiiba kor amba hoos u dhacday.
Waxa la helaa tusaale loo yaqaan CPI (Consumer Price Index) oo ah ascaarta alaabadaas iyo adeegyadaas isku celceliska ah boqolkiiba inta uu ka joogo. Ayaan darro dalkeena weli taas lagama hirgelin. Inaynu nidhaahno sicir barar ayaa jiree mooyee, inta uu leeg yahay iyo kicidiisa boqolkiiba inta sanadka kacday amba bisha korodhay cilmiyan ma sheegi karno.
2- Waa inaynu hirgelinaa isticmaalka shilinka ooy hormood ka dhignaa maxaa yeelay shayga kaliya een Hanti u haysana waa lacagta shillinka dalkeena umaad walibana waxay ku faanta lacagtooda.
3. Qiimaha iyo Sarifka lacagaha qalaad wax qiimeya Sariflayasha iyo ganacsatadda Dalka taasi oo ay Habeenkii qiimaha ay isku af gartaan keena suuqa iyaga oo aan u Aabonyeelaynin Bulshda rayidka ah, hadaba shaqadaasi ay hayaan ganacsatadu waa tii Y Qaban lahayd Bangiga dhexe ee somaliland Balse Illaahay ma garansiiin.
4. Wax muhiim ah in la xoojiyo Bangiga dhexe si uu Aqood ugu yeesho inuu sal gooyo Qiimaha sarifka lacagaha Qalaad.
5.Waa inaynu helnaa lacago fudud oo bulshadu si sahlan ku qaadan karto sida 10 kun S.land 20 kun s.land iyo 50.kun oo s.land Waraaqahasi waxay keenayaan in ay yaradaan sicir bararka kor isku shareeraya.Ogow sida loo soo daabacay 1000 shillin ayay tani u daabici karaa, kartidaasi waa in ay dawladu la tidaa.
6. Waa in laga fiirsadaa labada masuul ee loomagacabayo Banigaga dhexe iyo Wasaradda Maaliyadda waa labaca qof ee ka hor tagi kara awoodna u yeelan kara inay ganacsattda dhuunta qabtaan heerna u sameeyaan waayo waa tiro yar wax la badbadinayayina waa bulsho dhan.
7. Qodobka ugu muhiimsan ee keenaya inuu sii jiro sicir bararku waa ZAAD ka , Waa in xukumadu haday daacad ka tahay inay xakamayso skcir bararka soo noq
noqonaya waa in si isku dhafan dhinaca wakiilada, Guurtida Hayada dhaqalaha ee wakilada, iyo Wasaarada maaliyada iyo Qorshayntub ay si awood leh wax uga qabtaan. una qorsheeyaan.
8. Qodobka ugu danbeeya wax aan leyahay waa in Bangiyada wadanka dhamaantood deposit ahaan laga dhigaa somaliland shillin ku Darsoo Bangiga dhexe waa in ay isticmasha nidaamka aan kor ku xusay.
Guntii iyo Gunannadkii:
Dalka madaxa u sareeya Waa Dhaqaleyahan uuna ka dharagsan yahay Amuurtani An ka hadlaayo waxaan se jecelahay inaanu gudi ku Hamsaaamine uu la imaado qorshe cad oo awood leh waayo waa madaxii u sareeyay Dalka isagana looga bahan yahY inuu xalkeeno.
Mawduucan ama Article kani waxaan ku eegay il yar ama ilshibirted balse waxaan ka tagay wax badan oon u baahanahay inay Aqoonyahanda dalka u soo kacay ay la imaadaan iyagu waxana jecelahay inan ku guulaysano inaga oo dhamaystiran arin tani.
Emial. caano202@hotmail.com ahmedcaanonuug@gmail.com